काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ – नेपाल कानुन आयोग
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
संशोधन गर्ने ऐनः प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
२०४८ सालको ऐन नं. ३४
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि जस्ता विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न गैर सरकारी क्षेत्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।
October 11, 2018	in काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
(१) यस ऐनको नाम “काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८” रहेकोछ ।
(क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले यस ऐनबमोजिम स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “डीन” भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(च) “स्कूल” भन्नाले विश्वविद्यालयका प्रत्येक संकायका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुने निकाय सम्झनु पर्छ ।
(छ) “कलेज” भन्नाले विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ज) “प्राचार्य” भन्नाले कलेजको प्राचार्य सम्झनु पर्छ ।
(१) कला, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना हुनेछ ।
(२) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न, धितो बन्धक राख्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
(६) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धुलिखेलमा रहनेछ ।
४. विश्वविद्यालय सभाको गठन
(१) देहायका सदस्यहरू भएको विश्वविद्यालय सभा हुनेछः–
(क) कुलपति -अध्यक्ष
(ख) सहकुलपति – सदस्य
(ग) उपकुलपति – सदस्य
(घ) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य
(च) सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ज) डीनहरू – सदस्य
(झ) प्राचार्यहरू मध्येबाट एक जना – सदस्य
(ञ) बनेपा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख – सदस्य
(ट) धुलिखेल नगर कार्यपालिकाको प्रमुख – सदस्य
(ड) चन्दादाताहरू मध्येबाट दुई जना – सदस्य
(ढ) लव्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येबाट पाँच जना – सदस्य
(ण) उद्योगपतिहरूमध्येबाट एक जना – सदस्य
(त) शिक्षकहरूमध्येबाट दुई जना – सदस्य
(थ) विद्यार्थीहरूमध्येबाट एक जना – सदस्य
(द) पुस्तकालयध्यक्ष, विश्वविद्यालय – सदस्य
(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ), (ड), (ढ), (ण), (त), (थ) बमोजिमका सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा सभाले र खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यहरू सहकुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिले मनोनीत गर्नेछ ।
(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) सभा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च र अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ ।
(क) सम्बन्धित विषयका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने ।
(ख) कलेजको शैक्षिक सम्बन्धन वारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।
(ग) उपाधिहरू निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने ।
(घ) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने र वार्षिक बजेट पारित गर्ने ।
(ङ) विश्वविद्यालयका नियमहरू पारित गर्ने ।
(च) विश्वविद्यालयका स्कूलहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने ।
(छ) विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने ।
(ज) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने ।
(झ) विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
(ञ) कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेमा त्यसको अनुमति प्रदान गर्ने ।
(ट) उपकुलपतिको नियुक्तिको लागि कुलपति समक्ष सिफारिश पेश गर्न समिति गठन गर्ने ।
(ठ) आवश्यकतानुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने ।
(ड) पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गर्ने ।
(१) विश्वविद्यालयको देहायका सदस्यहरू भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछः–
(क) उपकुलपति अध्यक्ष
(ग) डीनहरू मध्येबाट दुई जना सदस्य
(घ) सभाबाट मनोनीत शिक्षक प्रतिनिधि एक जना सदस्य
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरू विषयगत संकायको वर्णानुक्रम अनुसार पालै पालोसित सदस्य हुनेछन् ।
कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशनको पालना गर्ने ।
(ग) सभामा प्रस्तुत हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गर्ने ।
(घ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य ग्रहण गर्ने ।
(ङ) विश्वविद्यालयको कोष र चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सभाको नीति तथा निर्देशन भित्र रही आवश्यकतानुसार बेचविखन गर्ने ।
(च) विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको कार्यहरूको रेखदेख गर्ने, निरीक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।
(छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने ।
(ज) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने ।
(झ) कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गरी सभा समक्ष पेश गर्ने ।
(१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रूपमा देहायका सदस्यहरू भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछः–
(ग) डीनहरू सदस्य
(घ) विषय समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट पाँच जना सदस्य
(ङ) सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट दुई जना सदस्य
(२) पदेन सदस्यहरू वाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन सभाबाट हुनेछ ।
(क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कुरामा मुख्य निकायको रूपमा रही कार्य गर्ने ।
(ख) विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन तथा अध्यापनको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षाको स्तर र किसिम, मूल्याङ्कन विधिहरू, शिक्षण सामाग्रीहरू, विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी संख्या र योग्यता निर्धारण गर्ने ।
(ग) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
(घ) विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने ।
(ङ) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने ।
(च) मानार्थ उपाधिहरूको व्यवस्था गर्ने ।
(१) कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीनहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सामुहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ ।
(२) उच्च शिक्षाको लागि तोकिएको विषयहरूमा तोकिएका स्कूलहरू रहनेछन् ।
(३) स्कूलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) कलेजहरू सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको सबै अधिकार सभामा निहित रहनेछ ।
(२) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार सबै वा केही अधिकार कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई वा तोकिए बमोजिम स्थापना गरिएका समितिलाई सुम्पन सक्नेछ ।
विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः–
(च) अन्य पदाधिकारीहरू ।
(२) शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ ।
(३) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ ।
(४) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउने अधिकार हुनेछ ।
(५) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत भएका कार्यलाई कुलपति रद्द गर्न सक्नेछ ।
(६) कुलपतिको अन्य अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(७) कुलपतिले गर्ने भनी तोकिएको कार्य सहकुलपतिबाट गराउन सकिनेछ ।
(१) विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिबाट चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिनेछ ।
(२) उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) उपकुलपति पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।
(४) कुलपति तथा सहकुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु गराउनु उपकुलपतिको कर्तव्य हुनेछ र यसको प्रयोजनको निमित्त उपकुलपतिको विचारमा तत्काल कुनै काम कारवाही नगरी नहुने आकस्मिक अवस्था आइपरेको छ भन्ने लागेमा निजले उचित र आवश्यक देखेको काम कारवाही गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सकभर चाँडो सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई दिनेछ ।
(६) उपकुलपतिले सभाको निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(७) विश्वविद्यालयको सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक काम कारवाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ ।
(८) सभामा पेश हुने सबै विषयहरू उपकुलपति मार्फत पेश हुनेछन् ।
(९) विश्वविद्यालयका सबै कार्यहरू सभाको निर्देशनमा उपकुलपतिले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(१) विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको नियुक्ती उपकुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट चार वर्षको लागि हुनेछ ।
(२) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशलाई प्रमाणित गर्नेछ ।
(४) रजिष्ट्रारलाई विश्वविद्यालयको सबै प्रकारको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक कार्यको जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउने अधिकार हुनेछ ।
(५) विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन तथा प्राज्ञिक कार्यहरू रजिष्ट्रार अन्तर्गत सम्पन्न हुनेछन् ।
(६) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य अधिकार र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
१६. डीन र अन्य पदाधिकारीहरू
(१) डीनको नियुक्ति तीन वर्षको लागि हुनेछ ।
(२) डीन संकायको प्रमुख हुनेछ र निज पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ ।
(४) डीन र अन्य पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्कूलहरूमा संचालित हुनेछन । कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि आदि संकायका लागि स्कूलहरू स्थापित हुनेछन् ।
१८. विद्यापरिषद् र विषय समिति
(१) प्रत्येक स्कूलमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि एक विद्यापरिषद् रहनेछ ।
(२) प्रत्येक स्कूलमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नको लागि स्कूलको विद्या परिषद् अन्तर्गत विभिन्न विषय समितिहरू रहनेछन् ।
(३) विद्यापरिषद् र विषय समितिको गठन, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण सभाद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
२०. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता
विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन तोकिए बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्नेछ ।
२१. विघटन हुंँदाको परिणाम
विश्वविद्यालय विघटन भएका अवस्थामा यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।
२२. नियम बनाउने अधिकार
यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।ं